Qandaraaslaha Wuxuu Adeegsadaa Ellicott® Dredge ee Khadka Waqooyiga Australiyaanka ah
Qandaraaslaha Wuxuu Adeegsadaa Ellicott® Brand Dredge oo loogu talo galay 'Northern Australia Job Job'
Source: Macdanta & Dhisidda Daadinta Adduunka
Qandaraaslaha Australia iyo qandaraasleyaasha dhulka ayaa isticmaalaya Ellicott-ka '14-inch dhawaan® Brand B890 ayaa si cad u qeexeysa marinnada marinnada loogu talagalay lix bulshooyinka jasiiradaha go’doonsan ee ku teedsan Torres Strait ee u dhexeeya Waqooyiga Australia iyo New Guinea.
Qandaraaslaha hoolka Pty. Ltd., xarunteeduna tahay Queensland's Sunshine Coast, waxay ku guuleysatay qandaraaska shaqada Torres Strait ee dawladda Australiya.
Qandaraasku wuxuu ku lug leeyahay marinno biyoodyo waaweyn oo xamuul ah si ay ugu fidiyaan lix jaaliyadood jasiirad toos uga yimaada Cairns halkii laga xarayn lahaa gunta yar iyo sugida tarabuunka.
Saadka ee ka shaqeynaya gobolkan fog wuxuu kiciyay Qandaraaslaha Hall si ay u iibsadaan xayndaabka qashinka xNUMX-ton oo ah markab taageero. Dhamaadka dambe ee dambe waxaa kuxiran qolal la qaadan karo iyo jikada. Dabaqyada dhuumaha iyo dhuuxa ayaa loo kala socdaa loorar hore. Qalabka mashiinka ee '12,000T Caterpillar', IT30 oo loogu talagalay tuubooyinka shaqada qaada, 18-ton rough cree terrain cree terrain crane, baabuurta 18WD, iyo qalab kale ayaa lagu qaadayaa xarunta. Bakhaarka ayaa sidoo kale waday aqoon-isweydaarsi dhameystiran, dhowr boqol oo kun oo litir oo shidaal ah, iyo biyo-milixeyl cusbo leh.
Markay yimaadaan jasiirad kasta, sagxadda ayaa hoos loo dhigaa oo mashiinnada iyo tuubbooyinka waa la dejinayaa. Jidka dhuumaha ayaa la nadiifiyay xariiqda '14-inji' waxaa ku xirmay qori hawada. Meel xirxiran iyo dabin qulqulaya ayaa loo diyaariyey imaatinka Ellicott® nooca loo yaqaan 'dredge brand' kaas oo sidoo kale jiida laga jaro jasiirad ilaa jasiirad, ogolaanshaha cimilada.
Tayada biyuhu leeyihiin waxaa lagu kormeeraa iyadoo la adeegsanayo mitirka cunta yar, maadaama jasiiraduhu ka warqabaan ku tiirsanaanta warshadaha kalluumeysiga ee maxalliga ah.
Lixda marin ee mashruuca waxay ku kala duwan yihiin tirada iyo nooca walxaha la qallajinayo. Ciid, dhoobo, iyo "bumbooyin" dhuxul ah ayaa caadi u ah saddexda jasiiradood ee Koonfurta. Jasiiradda Waqooyiga ku dhow ee New Guinea waxaa ku yaal dhoobo badeed iyo dhoobo adag oo huruud ah. Tirada ayaa u dhexeysa 10,000 mitir kuyuubik illaa 60,000 mitir cubic midkiiba.
Ellicott® nooca dredge ayaa si fiican u shaqeynaya iyada oo la adeegsanayo cutter Rotary iyo wheel baaldi labadaba. Hawlwadeenadeenu waxay si gaar ah ula dhacsan yihiin gawaarida safarka ah ee safarka ah ee saxda ah ee ku aaddan meelaynta marinnada 40-mitir ballaaran, " Brian Hall, oo ah maamulaha Qandaraaslaha Hall ayaa yidhi.
Xaraash jilicsan oo dhererkeedu yahay '11-mitir' oo ay ku shaqeeyaan mashiinka '3306T CAT' kuna rakibay laba qaboojiye hawleed kor u qaadaya waajibaadka wuxuu fuliyaa wareejinta shidaalka iyo wareejinta barxada.
Loogu talagalay badweynta, qaanso been ah ayaa loo qaabeeyey oo lagu dhisay aqoon isweydaarsiga shirkadda si ay ugu habboonaato gadaashiisa gawaarida booska xiran. Brian Hall ayaa soo warisay in cutubkan, markii la rakibay, oo la saaray faleebooyin iyo dillaacyada iyo daaqadaha la xiray, ay is muujisay muddadii badweynta laga soo jiiday Brisbane ilaa Torres Strait
Fogaanshaha jasiiraddan awgeed, hawlgalku si joogto ah ayuu u socdaa shaqaaluhuna waa la beddelayaa iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha shirkadda. Durdurrada aaggu waxay soconayaan illaa siddeed gunti waxayna ku ciyaari karaan qashin-qubka dhuumaha iyo wareejinta doonyaha shaqada. In kasta oo cimiladu sababtay xoogaa waqti iyo qalab lumis ah, Brian Hall ayaa ku warramaysa in shirkaddu dhammaystirtay saddex ka mid ah lixda jasiiradood oo ay “ka horreysaa shaxda baararka”.
Waxaa laga daabacay Macdanta & Dhismaha Daadinta Adduunka
Ku Bilaab Mashruuca Qoditaanka Khadkaaga ee Ellicott